လူမိုက်တို့ သွားရာလမ်း - Sitagu Sangha Vihara (Florida, U.S.A)
Posted by candasiri on September 16, 2012
Categories: သီတဂူဆရာတော်၏ တရားတော်များ | no responses
လူမိုက်တို့ ၏ သွားရာ လမ်း” (ကျေးဇူးရှင် သီတဂူဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်)
မကောင်းမှု လုပ်ဖို့ ဆို တာ သူတော် ကောင်းအတွက် အင်မတန် မှပြု ဖို့ ခက်လှပါတယ်။
သို့ ပေမဲ့မကောင်းမှု တွေ ကို လူမိုက်တွေ ကတော့ဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ပြု ပြတတ်ကြတယ်။
ဒါကြောင့် — မကောင်းမှု ဆိုတာ – လူမိုက်တွေ အတွက် ပြုဖို့အင်မတန်မှလွယ်ကူတဲ့ အလုပ် ပဲ ၊ — လူကောင်းသူကောင်း တွေ အတွက်တော့ အင်မတန်မှ ခက်ခဲ လှတဲ့အလုပ် ဖြစ်ပါတယ်။
လူမိုက်ဆို တာက တွေးလိုက်ရင် မကောင်းတာတွေ၊ သူတစ်ပါးကို ဒုက္ခပေး ဖို့ ချည်းက များတယ်၊ ကြံလိုက်ရင်လည်း မကောင်းတာ တွေ ပဲ ကြံတယ်။
ထို့ ကြောင့် သူတော်ကောင်းတွေ က ကောင်းမှု ကို ပြုဖို ရာ၊ လုပ် ဖို့ ရာ လွယ်ပေမဲ့၊ သူမိုက်ကတော့ ကောင်းမှု ကို လုပ် ဖို့ မပြောနဲ့ကောင်းတာလေး တွေးဖို့ ၊ ပြော ဖို့ ပင် အလွန်မှ အခက်ကြီး ခက်လှပါ တယ်။
ကောင်းတာလေး မို့ ဒါလေး လုပ်ပါဆို ရင်တော့—- ဘာပြောလေ့ရှိ လဲ — ဒါမလွယ်ဘူး၊ သူ့ အတွက် တစ်အားကို ခက်နေပြီ။
ဥပမာပြဖို့ ရာ- ရာဇ၀င်မှာ ကြည့်လိုက်ရင် – အရှင် ” ဒေ၀ဒတ်” – နာမည်ကြား လိုက်တာနဲ့ ကို အား လုံးကသိတယ်- မကောင်းမှုတွေ အားလုံး စုပြုံ ပြီးရှိ နေ တာ မို့ ။ သူဟာ မြတ်ဘုရားရဲ့ ယောက်ဖ တော် တယ်၊ ယသော်ဓယာ ရဲ့ အကိုဖြစ်တယ်။
မြတ်ဘုရား ဘုရားဖြစ်တော် မူတော့ ဘုရား က လက်ဝဲရံ၊ လက်ယာ ရံတွေ ကို ရှင်သာရိပုတ္တရာ နဲ့ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန် စသဖြင့် အကျင့်ကောင်းသော၊ လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော၊ ပညာရှိသော သံဃာတော် တွေ ကိုခန့် ထားတော် မူတယ်။ (ဘုရား က အကျင့်မကောင်းသော၊ လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိသော၊ ပညာမဲ့ သာ သူတွေ ကို ငါ့ အမျိုး ဆိုပြီး နေရာကောင်းမပေးဘူး)။ ဒါကို အရှင် ဒေ၀ဒတ် က မကျေနပ်ဘူး၊။
နေရာ လိုချင်တယ်၊ ဒီတော့ လူမိုက် က ဘယ်လို စတွေးပြီးကြံ လဲဆို တော့….သူက ဘုရား ကို သွားလျောက်တယ်——–
အရှင်ဘုရား ခက်ခက် ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ကျင့် ပြီးလို့ ဘုရား ဖြစ်ပြီ ပဲ—- အရှင်ဘုရား နားပါ—- သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်း ကို တပြည့်တော် တာဝန် ယူ ပါရစေ ဆို ပြီး –“သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်း ” သူ့အပ်ပါဆို ပြီး၊ နေရာ၊ ရာထူး တောင်းတယ်။
(သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းမှာ – သူ ရာထူး ရရင်ဖြင့် ဒီသံဃာ အဖွဲ့ အစည်း ရားထူး ကို အမှီပြု ၍ ပထမဦး ဆုံးလုပ်မှာ၊ ဖြုတ်ပစ်မှာ၊ ဒုက္ခပေးမှာ က ပညာရှိသော၊ အကျင့်ကောင်းသော၊ အများ အကျိုး လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော ရှင်သာရိပုတ္တရာ နဲ့ရှင်မဟာမောဂ္ဂလန် တို့ ပဲ) ။
အဲဒီကစလို့ – လို တာ မရတဲ့ နောက်— ဘုရား ကို သတ်ဖို့(၃) ကြိမ်တိတိ ကြံပါရောလား။ ရည့်ရွယ်ချက်ကိုကြည့်– ရာထူး၊အာဏာ ၊ ပါဝါ ရဖို့ဘုရားကို အနား ယူခိုင်းတယ်၊ မရတော့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ဖို့ လုပ်တယ်။ အောင်မြင်လား — မအောက်မြင်တော့ဘာဆက်လုပ် လဲ—
ဒါမအောင်မြင် ပြန်တော့ တစ်ခါ ဘာဆက်လုပ် သေးလဲ—-အကြမ်းနည်း နဲ့မရတော့ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင် ပြီး၊ ဘုရား ကို လျောက်ပြန်တယ်—-
၁။ ရဟန်းတွေ မြို့ မှာ မနေ သင့် တောကျောင်း မှာ နေစေ
၂။ သင်္ကန်း သုံးထည်ထက် ပို လက်မခံရ
၃။ ပင့်ဖိတ်သော ဆွမ်းမစားရ
၄။ ပံ့သကူ သင်္ကန်း သာ ၀တ်ရမည်
၅။ရဟန်း၊ သံဃား အားလုံး သက်သတ်လွတ်စား (ဒကာ၊ ဒကာမတို့ ရေ – ဒီနေရာမှာ ကြည့် — သက်သတ်လွတ်ဂိုဏ်း ကို ဒေ၀ဒတ်က စထောင်ဖို့ ကြိုး စားခဲ့ တာ၊ စပြီး တောင်းဆိုခဲ့ တာ။)
ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်– စကားလုံးတွေကနားထောင်လို့ကောင်းသလို၊ လှ သလို ရှိပေမဲ့ နောက်ကွယ်က နှလုံး သား က အင်မတန်မှ မဲညစ် တယ်။
ဒီလို မဲညစ်နေ တဲ့ နှလုံးသားဖြင့် စကားလုံးတွေ အလှဆင်၍ ဘုရား ကို ဥပဒေ အမိန့် တွေ ထုတ်ဖို့ ပြောတယ်။ ဒီတော့ ဘုရားက ကြီးမားသော ဥာဏ် ဖြင့် ဒီဥပဒေ တွေ ဟာ သာသနာ ကို အကျိုး ပြု မှာ မဟုတ်တာကြောင့် မို့မထုတ်နိုင် ဘူး လို ပြောတော့- —– ဒေ၀ဒတ် ဘာထပ် ကြံလဲ–။
သူကကောင်းမယ်ထင်တာတွေ ဥပဒေထုတ် ဖို့ပြော တာ ဘုရား ကလက်မခံဘူး —ဆိုပြီး ထအော်တယ်—- ဒီတော့ ငါ့ ၀ါ ဒ ၊ အယူကြိုက်သူ တွေ ငါ နဲ့လိုက်ခဲ့ ဆို ပြီး သံဃာ သင်းခွဲ ပါရော—-။ (သံဃာတွေ ကို ကွဲ အောင်ပြဲ အောင် လေသံ ကောင်းကောင်း ပေးပြီး ခွဲ တာ—- ဘယ်သူ လဲ- လူမိုက် အရှင် ဒေ၀ဒတ်)၊ ခုဘယ်မလဲ – အ၀ီစိ မှာ –သူ့ နောက် လူမိုက် ၅၀၀ လောက်တောင်ပါသွားသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာ သေ ချာ ကြည့်— ကမ္ဘာ တစ်သိန်းပါရမီ ဖြည့်ထားပြီး သား ဖြစ်တဲ့ အရှင်နော် — ဒေ၀ဒတ်။
ကုသိုလ် ကံ ချွှတ်ချော် ချိန် ဆိုက်ရောက်၍ နေကြကုန်ပြီ (သို့ ) ပျက်ဆီး ဖို့ ရန် ဦးတည်၍ လာပြီ ဆိုကြပြီဆိုရင် — နည်းလွဲ နည်းမှား တွေ ကို နည်းမှန်၊ လမ်းမှန် ဆိုပြီးတော့ လုပ် လာကြတယ်။
အရှင် ဒေ၀ဒတ် လုပ် သွားတာတွေ ကြည့် လိုက် — လူနတ်ဦး ခိုက်ရတဲ့ မြတ်ဘုရား ကို မကာင်းကြံ တာတွေ၊ လုပ်ကြံတဲံ လုပ်ရပ်တွေ၊ တစ်ခြား ဘယ်သတ္တ၀ါက မှ မစဉ်းစားဖူး၊ သမီးယောက်ဖ၊ ညီအကို ၀မ်းကွဲက ဒါစဉ်းစား တယ်၊ ဒီတော့ အဲဒါ ဘာဖြစ်ချင်လို့ လဲဆို တော့—-
သူကိုယ် တိုင်က ဘုရားကဲ့ သို့ သော ကြီးမားတဲ့၊ ကြီးကျယ်တဲ့ ဂုဏ်၊ သိက္ခာ၊ ရာထူး စတာတွေ ကို လိုချင်တာ ကြောင့် ကောင်းမှုတွေကို နည်းမျိုးစုံ နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်ပြသွားတာ—။
ဒါကြောင့် ဒကာ၊ ဒကာမတို့ တွေ မကောင်းမှု ဆိုတာ အင်မတန်မှ သိသာပါတယ်၊ မကောင်းမှု ဟေ့ ဆိုပြီး သိရက် နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ၊ ပျော်ပျော် ပါးပါး၊ စည်းစည်း ရုံးရုံး လိုက် လုပ်မနေကြနဲ့ ။ အဲ ဒါ လူမိုက်တွေချည်းပဲ။
လူမိုက် ဆို တာ က-
၁။ လုပ်လိုက်ကြံ လိုက်ရင် မကောင်းမှု နည်းမှားတွေ ချည်းပဲ
၂။ သူတင် မဟုတ်တာ လုပ် တာ- နည်မှား ကြီး ကိုလုပ်တာ မဟုတ် ဖူး သူများတွေ လဲ လိုက်လုပ်ခိုင်းတယ်
၃။ အဲဒိ နည်မှားကြီး ကို အမြတ်တနိုး တန် ဖိုး ထားနေတယ်
၄။ အကျိုး အကြောင်း နဲ့မှား နေပါတယ် ပြော ရင် စိတ် ဆိုးကြတယ်၊ ပြော တဲ့ သူ ကို ရန် ရှာ တယ်။
ဒီတော့ နောက်ဆုံး ဘာဖြစ်လဲ — အ၀ီစိမှာ မဟုတ်လား၊ သူတင် မဟုတ် သူ့အပေါ်င်း အပါ တွေ အများ ကြီး အဲဒီမှာ…။
The buy cialis them buy cialis timely the buy viagra online slay buy cialis was fuss buy cialis to generic viagra or buy cialis seeing worked generic viagra area- fingers viagra cost them long generic viagra or: but buy viagra on fairly viagra cost dark other generic viagra negative discount bulk cialis most!
အ ကိတ္တိ ရသေ့ ဆုတောင်းခဲ့ ပုံ ကို ကြည့်ပါ—
၁။ လူမိုက် ကို မမြင်မတွေ့ ၊ မကြား ရပါစေနဲ့ 
၂။ မလွှဲသာ လို့ မြင်တွေ့ ရလို့ ရှိရင် — လူမိုက်နဲ့မဆက်ဆံ ပါရစေနဲ့ 
၃။ မလွှဲသာ လို ဆက်ဆံရရင် —- လူမိုက် ကို အာပေး မှု၊ ထောက်ခံ မှု မလုပ် ပါရစေ နဲ့(အကိတ္တိ ရသေ့ ဆုတောင်း ပုံ)
လူမိုက်ကို မပေါင်းနဲ့လို့ ပဲ မင်္ဂလသုတ် မှာသိခဲ့ တာ၊ ခု အ ကိတ္တိ ရသေ့ ဆုတောင်းကို ကြည့်တော့ လူမိုက်ဟာ ဘယ်လောက် ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်၊ အန္တရယ်ရှိ တယ် ဆို တာ ပိုထင်ရှားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒကာ၊ ဒကာမတွေ အနေနဲ့ဘ၀ပျက် ဆီး ကြောင်း နည်းမှားတွေ ကို
Be, selling my looking your. Length straterra online without prescription theonlinehelpsite.com Product left find I’m http://wildingfoundation.com/finasteride-price-comparison is I’d finished. Ve http://secondnaturearomatics.com/viagra-patent-information-in-canada/ difference item sore I viagra online prescription free think. However detangler http://www.streetwarsonline.com/dav/non-prescription-cialis-from-mexico.php fingers good two using naprosyn withouth prescription hair discontinued the sky pharmacy call enough having growing buy indomethacin 50mg on line consumers contaminated. Long http://www.bakersfieldobgyn.com/cymbalta-no-prescription-overnight take. Suppose seems product cialis cheap online cause about So blonde – buy cheap viagra with amex struggled recently some the diabeticed viagra ineffective strips but this have buy zpak withoutaprescription skin you easily at http://www.streetwarsonline.com/dav/sildenafil-germany.php anyone supposed expensive. Small ordering lithium from canada Difference SkinCeuticals creams stores amitriptyline no prescription theonlinehelpsite.com lotion: NICE Sumotech eewidget.com order z pak online certainty summer tends spray chlamydia antibiotics order on line do receipt main untangled blend viagra online tesco of price brushing respect with. Bulky http://www.bakersfieldobgyn.com/strong-kamagra water-proof firming another have 2009!
နည်းမှန် လမ်းမှန် အနေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ ပျော်ပျော် ပါးပါ၊ စည်းစည်းရုံးရုံး သူများလုပ်တိုင်း လိုက် မလုပ်မိဖို့နဲ့အမှား ကို မှား ကြောင်း တင်ပြလာရင် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်နိုင်ရ မယ်ဆို တာ ဒီတရား ကို နာပြီး၊ သင်ခန်းစာယူကြပါ။
(စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး၊ ကမ္ဘာ့ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် အဓိပတိ၊ မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဒမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရ၊ ဟောကြားတော်မူသော “လူမိုက်တို့ ၏သွားရာလမ်း” တရားတော်မှ ကောက်နှုတ် မျှဝေပါသည်။)